1 USD သို့ EUR ᐈ ပွောငျး $1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ တွင် ယူရို
1 USD သို့ EUR
သငျသညျပြောင်းလဲပါပြီ 1 🇺🇸 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ 🇪🇺 ယူရို. သငျသညျအရှိဆုံးတိကျမှုရလဒ်ပြသနိုင်ဖို့ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုအသုံးပြုပါ. ငွေကြေးပြောင်း 1 USD သို့ EUR. ဘယ်လောက်လဲ $1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ယူရို? — €0.83 EUR.ယင်းကိုကြည့်ပါ ပြောင်းပြန်သင်တန်း EUR သို့ USD.ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်၌စိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည် USD EUR သမိုင်းဆိုင်ရာဇယား, နှင့် USD EUR သမိုင်းဆိုင်ရာမှာ data ငွေလဲနှုန်းကို၏. ကြိုးစားကြဖို့အခမဲ့ခံစားရ ပိုပြီးပြောင်း...
ပွောငျး 1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ယူရို
မှုနှုန်းခြင်းအားဖြင့်: €0.830 EUR (-0.00260)-0.313%
ပြောင်းပြန်: $1.204 USD
မင်းသိလား? တစ်ဦးကလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်, ထိုနေ့၌, ငွေကြေးနှုန်းကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရန် ယူရို ခဲ့: €0.924. ထိုအချိန်မှစ. ငွေလဲနှုန်းရှိပါတယ် အားဖြင့်ယုတ်လျော့ -0.0937 EUR (-10.14%).
50 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ယူရို100 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ယူရို150 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ယူရို200 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ယူရို250 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ယူရို500 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ယူရို1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ယူရို2000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ယူရို4000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ယူရို8000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ယူရို800 ယူရို သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ0.0371 Binance Coin သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ1 ယူရို သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ1 PacCoin သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ400 ယူရို သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ1.5 Vcash သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ1 ယူရို သို့ အီရန်ရီအော်လ်95000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ အိန္ဒိယ ရူပီး100000 Goat သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ1 Goat သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ4.99 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ထိုင်းဘတ်1250000 CasinoCoin သို့ Ripple1 MorpheusCoin သို့ ဂျော်ဒန်ဒီနား1000 MorpheusCoin သို့ ဂျော်ဒန်ဒီနား
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 22 Apr 2021 12:00:02 +0000.